15 माth जून २०१
LEI-U बुद्धिमान ढोका लक LVD-05 आउँदै नयाँ प्रकार
L स्मार्ट लक टेक्नोलोजी 1 1 स्मार्ट लक, फिंगरप्रिन्ट, पासकोड, आरएफआईडी कार्ड, आपतकालीन कुञ्जी, मोबाइल आवेदन मा5keyless प्रविष्टि विधि जोड्दछ। अत्यधिक सटीक फिंगरप्रिन्ट पहिचान, ०.३ सेकेन्ड भित्र ढोका अनलक, र १२० अद्वितीय फिंगरप्रिन्ट सम्म भण्डार।
त्यहाँ4कोर पेटेंट छन् र दुनिया भर मा धेरै भाषा मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्मार्ट लक निजी घरहरु, वाणिज्यिक कार्यालय, आवासीय भवनहरु र अधिक को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ तिम्रो बिचार भन्दा.
LVD-05 परम्परागत मानिसहरुको कल्पना बिगार्नुहोस् डिजिटल तालाहरु
यो स्मार्ट लक यस्तो व्यावसायिक कार्यालय, अपार्टमेन्ट भवन, टेनेमेन्ट र शयनकक्ष को रूप मा आवेदन परिदृश्यहरु लाई समर्थन गर्दछ।
अपार्टमेन्ट व्यवस्थापन प्रणाली: तपाइँ भाडामा लिने व्यवस्थापन र पानी र बिजुली को शुल्क को प्रबंधन सहित सम्पूर्ण अपार्टमेन्ट को सबै तालाहरु को प्रबंधन गर्न सक्नुहुन्छ।
मार्ग मोड: जब तपाइँ बारम्बार ढोका खोल्न/बन्द गर्न को लागी आवश्यक छ, तपाइँ यो मोड लाई चालू गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरक्षित लक मोड: प्रशासक को बाहेक, अन्य सबै प्रयोगकर्ताहरु ताला खोल्न सक्दैनन्।
पास कोड उत्पन्न: प्रशासक स्थायी, समय, एक समय, कस्टम र चक्रीय सहित तपाइँको छनौट को लागी5मोड संग अनुप्रयोग मा एक पासवर्ड उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। उपस्थिति व्यवस्थापन: काम गर्ने घण्टा, छुट्टिहरु र घडी मा मोड सेट गर्न सकिन्छ। उपस्थिति तथ्या्क प्रत्येक महिना मा जाँच गर्न सकिन्छ।
खोल्न को लागी साहस, आविष्कार गर्न को लागी साहस, पहिलो गुणस्तर राख्ने र सर्वोच्चता को रूप मा ग्राहकहरु लाई व्यवहार गर्ने.
LEI-U होम मा, हामी विश्वास गर्छौं कि घर को ढोका मात्र तपाइँको घर लाई अवांछित आगन्तुकहरु बाट सुरक्षित राख्न को बारे मा छैन। यो सही मानिसहरु लाई दिईरहेको छ - सही समयमा, र सधैं घर मालिकको नियन्त्रणमा।
पोस्ट समय: जून 15-2019